कोरियन भाषाका लागि भरोसाको केन्द्र बन्यो भरतपुरको सी स्टार कन्सल्टेन्सी - Narayanionline.com
कोरियन भाषाका लागि भरोसाको केन्द्र बन्यो भरतपुरको सी स्टार कन्सल्टेन्सी
बसन्त पोखरेल चितवनको शैक्षिक क्षेत्रमा चिरपरिचित नै नाम हो । नवलपुरको कावासोती नगरपालिका–६, पुरानो कावासोतीमा २७ वर्ष अगाडि जन्मिएका पोखरेलले कोरियन भाषा र कम्प्युटर शिक्षणमा अलग्गै पहिचान बनाएका छन् । १२ कक्षा पास गर्नासाथ विदेश जाने रहरले सन् २००८ मा दक्षिण कोरिया हानिएका उनी चार वर्षपछि सन् २०१२ मा नेपाल फर्किए । उनी विदेशबाट पैसा बोकेर भन्दा पनि शिक्षा र ज्ञान बोकेर फर्किए । काठमाडौँमा तीन वर्षसम्म कोरियन भाषा पढाए । विश्वभाषा क्याम्पसले उनलाई भाषा शिक्षकको अनुमतिपत्र पनि दियो । त्यही अनुमतिपत्र र कयौं प्रशंसापत्रहरु बोकेर कोरियन भाषा शिक्षणमा लागिरहने प्रतिबद्धता गर्दै उनी चितवन फर्किए ।
भरतपुरको सप्तगण्डकी चोकमा पोखरेलले २०७२ सालमा सी स्टार एजुकेसनल कन्सल्टेन्सी स्थापना गरे । प्रदेश सरकारबाट मान्यता प्राप्त कन्सल्टेन्सीमा कम्प्युटरका विभिन्न तहको प्रशिक्षणसँगै कोरियन भाषाको पनि अध्यापन हुँदै आएको छ । कोरियन भाषा शिक्षणका उनले चारवटा पुस्तक पनि लेखेका छन् । दक्षिण कोरियाबाट ज्ञान, सीप, शिक्षा र अनुभव बोकेर नेपाल फर्किएपछि चितवनलाई नै कर्मथलो बनाइरहेका उनै बसन्त पोखरेलसँग नारायणी अनलाइनले व्यवसायिक वार्ता गरेको छ । प्रस्तुत छ वार्ताको सम्पादित अंश :
प्रश्न : नेपाली युवाहरुले कोरिया नै रोज्नुपर्नाको कारण के हो ?
जवाफ : दक्षिण कोरिया अहिले नेपाली युवाहरुको लागि थोरै लगानीमा धेरै कमाउन सक्ने उत्कृष्ट गन्तव्य बनेको छ । अष्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान र युरोपका विभिन्न देशहरु ८ देखि १० लाख न्यूनतम लगानी गर्न नसके नआँटे पनि हुन्छ । कोरियाका लागि ९२ हजार खर्च गर्दा सबै प्रक्रिया सकिन्छ । कोरिया पुगेपछि मासिक एक लाख ७६ हजार रुपैयाँ नेपाली युवाहरुले न्यूनतम आम्दानी गरिरहेका छन् । यो आफैमा निम्न आयस्तर भएका नेपाली नागरिकको लागि निकै सकारात्मक विषय हो ।
प्रश्न : कोरिया भाषा पढ्न कति कठिन छ ?
जवाफ: अन्य भाषाको तुलनामा कोरियन भाषामा अक्षरको संरचना निकै कम हुन्छ । आधा कम व्याकरण हुन्छ । तस्बिरसँग कन्भर्ट गरेर मेहनत गरेर पढेमा भाषा गाहे छैन । सी स्टार कन्सल्टेन्सीले विद्यार्थीलाई पर्याप्त शैक्षिक सामग्री, वैज्ञानिक र आधुनिक शिक्षण विधिमार्फत् भाषाको कक्षा सञ्चालन गरिरहेकोले पनि कोरियन भाषा सिकाइमा विद्यार्थीहरुले राम्रो नतिजा हासिल गरिहेका छन् ।
प्रश्न: कन्सल्टेन्सीहरुको भीडमा सी स्टार नै किन ?
जवाफ : मेरो कन्सल्टेन्सीमा कक्षा प्रभावकारी छैन भनेर आजसम्म कसैले पनि भनेको छैन । विद्यार्थीलाई हामीले आधुनिक र वैज्ञानिक शिक्षण विधिद्वारा चित्र वा फोटो मार्फत् भाषा सिकाउने गरेका छौं । हामीले नेपाली भाषासँग मिल्ने गरी फर्मुलाहरु प्रयोग गर्ने भएकोले हामी भाषा शिक्षणमा अब्बल पहिचान बनाउ सफल भएका छौं । स्किल परीक्षणमा ३३ जना पठाएकोमा हाम्रो कन्सल्टेन्सीबाट जम्मा ६ जना मात्र फेल भएका छन् । सी स्टारबाट आजसम्म चितवनका २५० बढी विद्यार्थी कोरिया पुग्न सफल भएकोले पनि कोरियन भाषा सिक्न विद्यार्थीको आकर्षण बढेको हो ।
त्यसैगरी हामीले हरेक हप्ता भाषा परीक्षा लिने, हप्ताको एक चोटी गेष्ट लेक्चरको रुपमा कोरियन नागरिकलाई नै ल्याउने जस्ता व्यवहारिक अभ्यास गरिरहेका छौं ।
प्रश्न: कोरियन भाषा सिक्न कति शुल्क लाग्छ ?
जवाफ : हाम्रोमा कोरियन भाषा सिक्न ६ महिनाको लागि १५ हजार रुपैयाँ लिने गरिएको छ । आवश्यक सामग्रीहरु विद्यार्थीलाई हामीले पर्याप्तरुपमा उपलब्ध गराउने गरेका छौं । ईपीएस कार्यालय काठमाडौँमा हाम्रो प्रत्यक्ष चिनजान भएकोले पनि कोरियाको लागि हाम्रो विद्यार्थीलाई कुनै पनि कठिनाइ नहुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौं ।
प्रश्न : अन्त्यमा, सी स्टारबाट लिन सकिने अन्य सुविधाहरु के के छन् ?
जवाफ : कोरियन भाषाको अतिरिक्त हामीले अंग्रेजी भाषा शिक्षणका विभिन्न कोर्षहरु पनि पढाइरहेका छौं । जसमा साधारणदेखि एड्भान्ससम्म पर्छन् । त्यसैगरी कम्युटर र विभिन्न तहका ट्युसन कक्षाहरु पनि सञ्चालन गरिहेका छौं । कम्प्युटरमा साधारणदेखि डिप्लोमा सम्मका कक्षाहरु सञ्चालन हुन्छन् । पारिवारिक शान्त वातावरणमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी पढाउनु नै हाम्रो मुख्य विशेषता हो ।
एक प्रतिक्रिया on “कोरियन भाषाका लागि भरोसाको केन्द्र बन्यो भरतपुरको सी स्टार कन्सल्टेन्सी”
basanta sir lai aja pragati ko suvakamana xa….
रोजगारी गुमाएर फर्कनसक्ने युवाबारे ध्यान दिन सकिएन भने गम्भीर असर पर्छ : मुख्यमन्त्री पौडेल
देशभर मनसुन सक्रिय, यस्तो छ आजको मौसम पूर्वानुमान
डब्लुएचओ भन्छ – कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप पत्ता नलाग्न पनि सक्छ